प्रदेश २ मा १७ सय बढीको पिसिआर नतिजा आउन बाँकी – Health Post Nepal
प्रदेश २ मा १७ सय बढीको पिसिआर नतिजा आउन बाँकी
२०७७ जेठ ८ गते १७:५३
प्रदेश २ लाई कोरोनाको उच्च जोखिम क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सबैभन्दा बढी संख्याले प्रदेश २ लाई कोरोनाको उच्च जोखिम बनाएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा १ सय ३७ जनाकाे कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमणको दर हरेक दिन बढिरहे पनि प्रदेश २ मा परीक्षणको दायर अझै बढ्न सकेको छैन। परीक्षण दायरा बढ्न नसक्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि प्रभावकारी अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेशको सदरमुकाम जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण बन्द भएको एक साता पुग्न लागेको छ। राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकु र प्रादेशिक प्रयोगशालाको नतिजा फरक देखिएपछि प्रादेशिक अस्पतालमा दोस्रोपटक स्वाब परीक्षण बन्द भएको हो। यसअघि स्वास्थ्य विभागले पठाएको पिसिआर मेसिन भरपर्दो नरहेको भन्दै परीक्षण बन्द गरेर अर्को मेसिन जडान गरिएको थियो।
राष्ट्रिय प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा आफै‌ जनकपुर पुगेर जडान गर्न लगाएको पिसिआर मेसिनले फरक नतिजा दिएको भन्दै प्राविधिकहरूले परीक्षण बन्द गरेका छन्। प्रदेश २ कै नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा समेत पिसिआर परीक्षणले गति लिन सकेको छैन। ‘भिटिएम’ किटको अभाव भएपछि स्वाब संकलन नहुँदा वीरगन्जमा पिसिआर परीक्षणले गति लिन नसकेको बताइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा १ सय ३७ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढिरहे पनि प्रदेश २ मा परीक्षणको दायर अझै बढ्न सकेको छैन। परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि प्रभावकारी ढ‌गले अगाडि बढ्न सकेको छैन।
‘स्क्रिनिङ’ र ‘ट्रेसिङ’ लाई तीव्रता दिनुपर्ने बेला प्रदेश २ मा स्वाब परीक्षणको चाङ छ। प्रादेशिक अस्पतालको पिसिआरले विश्वसनीय परिणाम दिन नसक्दा राष्ट्रिय प्रयोगशालामै भरपर्नु बाध्यता अझै कायम छ।
‘प्रादेशिक अस्पतालको पिसिआरबाट परीक्षण हुनु र नहुनु केही अर्थ राख्दैन, यहाँको परीक्षणबाट देखिएको नजिता राष्ट्रिय प्रयोगशलाभन्दा फरक आउँछ,’ प्रादेशिक अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘परीक्षण नै नभए ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ कसरी हुन्छ ?’ संक्रमण फैलिनबाट रोक्न परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै ट्रेसिङमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
१ हजार ७ सय ७० नतिजा आउन बाँकी
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबार अपरान्ह सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा १ हजार ७ सय ७० जना कोरोना शंकास्पदको स्वाब नतिजा आउन बाँकी छ। कुल ७ हजार २ सय ४२ जनाको स्वाब संकलन भएकोमा यति संख्यामा नतिजा आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नतिजा आएकामध्ये १ सय ३७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सप्तरीका १ सय ४, सिरहाका १ सय २९, धनुषाका ४ सय १६, महोत्तरीका ४०, सर्लाहीका ७५, रौतहटका ३ सय ३, बाराका २ सय ८७ र पर्साका ४ सय १६ जनाको स्वाब नतिजा आउन बाँकी छ।
‘एउटै जिल्लामा तीन सयभन्दा बढीको स्वाब रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको अवस्थामा ‘कन्ट्याक्ट’ ट्रेसिङ कहिलेसम्म भ्याउने ?,’ प्रादेशिक अस्पतालका ती चिकित्सकको प्रश्न छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा. प्रमोद यादव भिटिएम किटको अभाव हुँदा स्वाब संकलन प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘क्वारेन्टाइनमा चाप बढेको छ, सबैको परीक्षण गर्नुपर्नेछ,’ डा.यादवले भने, ‘हामीले माग गरेका छौं, चाँडै आउँछ होला।’
डा.यादवले प्रदेश २ का लागि दैनिक १ हजारदेखि १५ सयको दरले भिटिएम किट आवश्यक रहेको बताए।
टेकु प्रयोगशालामाथि मात्र निर्भर भएपछि प्रदेश २ मा परीक्षणको दायर बढ्न सकेको छैन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले एक साताभित्र दुईवटा पिसिआर मेसिन जडान भइसक्ने भनेको दुई साताभन्दा बढी भइसके पनि अत्तोपत्तो छैन।
प्रदेश सरकारले आफै खरिद गरेर जनकपुर र राजविराजका लागि बढी क्षमता भएको दुईवटा पिसिआर जडान गर्न लागेको मन्त्री यादवले बताएका थिए। तर, हालसम्म पिसिआर आउन सकेको छैन।
आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक डा.यादव काठमाडाै‌काे एक सप्लायरबाट जनकपुर र राजविराजमा जडान गर्न दुईवटा पिसिआर खरिद भइसकेको दाबी गर्छन्। ‘अन्य उपकरणबाहेक २७/२७ लाख खर्चेर दुईवटा पिसिआर प्रदेश सरकारले खरिद गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘एक साताभित्र जनकपुर र राजविराजमा जडान भइसक्छ।’
प्रदेश २ का ८ जिल्लाका गरी ८ हजार ८ सय ९५ जना क्वारेन्टाइन तथा ६ हजार ९८ जना होमक्वारेन्टाइन र १ सय ३८ जना आइसोलेसनमा छन्।